Safarka Thailand? Diyaar u noqo inaad qaadato 3 imtixaan oo ah COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Thailand War Deg Deg Ah » Safarka Thailand? Diyaar u noqo inaad qaadato 3 imtixaan oo ah COVID-19
Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Haddii aad u safreyso Thailand, diyaar u noqo in lagu tijaabiyo seddex jeer - tan koowaad waa maalinta imaanshaha, tan labaadna lixaad ama maalinta toddobaad, iyo tan seddexaad maalinta 12aad ama 13aad.
Raiisel wasaaraha Thailand Gen. Prayut Chan-o-cha wuxuu dib u furay safarkii uu ku tagi lahaa Phuket safaraalka la talaalay shalay, 1-dii July.
Shuruudaha ugu muhiimsan ee loogu talagalay booqdayaasha ayaa ah inay tahay inay ka yimaadaan waddammada khatarta ku ah COVID-19
Safrayaashu waa inay iska diiwaangeliyaan barnaamijyada la xiriira oo ay soo gudbiyaan dukumiintiyadooda si loo xaqiijiyo.
Phuket ayaa dib loogu furay dalxiisayaasha la tallaalay maanta (1da Luulyo), iyadoo Ra'iisul Wasaaraha, Gen. Prayut Chan-o-cha, lagu wado inuu gaaro gobolka si uu u kormeero furitaankiisa. Websaytka Royal Gazette ayaa dhowaan daabacay wareegtadii 26aad ee deg-degga ahayd ee shuruudaha iyo tilmaamaha dib loogu furayo waaxda dalxiiska ee aagga tijaabada ah, laga bilaabo Khamiista, Julaay 1. 2021.
Wareegtadu waxay diiradda saaraysaa shuruudaha dheeraadka ah iyo tallaabooyinka lagu xakameynayo cudurrada socdaalka soo galaya Thailand. Wareegtada ayaa lagu magacaabay aagagga dalxiiska ee gobollada duulimaadka, iyadoo la dejinayo shuruudo, waqti, maamul, iyo shuruudo kale oo loogu talagalay socdaalka galaya boqortooyada.
Marka laga hadlayo tallaabooyinka xakamaynta cudurrada, Xarunta Maamulka COVID-19 Xaaladda (CCSA) waxay soo saartay tilmaamo ku saabsan qorshaha dalxiiska ee Phuket Sandbox, waxaana lagu daabacay bogga Royal Gazette. Shuruudaha ugu waaweyni sidii hore ayey sii ahaanayaan - oo xusid mudan, booqdayaashu waa inay ka yimaadaan meel hoose Khatarta COVID-19 dalalka ama meelaha. Waxaa looga baahan yahay inay iska diiwaangeliyaan barnaamijyada la xiriira oo ay soo gudbiyaan dukumiintigooda si loo xaqiijiyo. Dukumiintiyada waa sidan soo socota:
- Shahaadada Gelitaanka
- Shahaadada caafimaadka ee muujineysa infekshanka COVID-19 ee xun, iyadoo la adeegsanayo baaritaanka silsiladda 'polymerase chain reactions' (RT-PCR) gudahood 72 saacadood kahor bixitaanka
- Caymiska caafimaadka, oo daboolaya COVID-19, oo leh caymiska ugu yar ee 100,000 US dollars
Hadana haddii natiijooyinkoodu xun yihiin 14 maalmood ka dib, waxay u safri karaan aagag kale. Haddii ay joogaan wax ka yar 14 maalmood, looma oggola inay u safraan meelo ka baxsan meelaha loogu talagalay. (Sawirka faylka - Safarka doonida ee Koh Hae, Phuket)
- Caddaynta bixinta hooyga Maamulka iyo Caafimaadka (SHA) oo lagu daray hoy ugu yaraan 14 maalmood. Soo-booqdeyaasha joogaya wax kayar 14 maalmood waa inay haystaan ​​tigidh qeexaya taariikhda bixitaanka
- Shahaadada Tallaalka oo la soo saaray ugu yaraan 14 maalmood. Dadka da'doodu ka yar tahay 18 sano, oo ay weheliyaan waalidkood ama masuuliyiintooda, waa inay haystaan ​​caddeyn caafimaad oo muujineysa infekshanka 'COVID-19' oo aan wanaagsaneyn 72 saacadood gudahood ka hor bixitaanka.
Socotada galaya boqortooyada waa inay maraan nidaamka socdaalka, rakibaan codsi ama nidaam dabagal oo la tijaabiyo seddex jeer. Midka koowaad waa maalinta imaatinka, tan labaadna maalinta lixaad ama toddobaad iyo tan saddexaad ee maalinta 12aad ama 13aad. Soo-booqdeyaashu waa inay bixiyaan kharashka baaritaanka COVID-19. Haddii natiijooyinkoodu xun yihiin 14 maalmood ka dib, waxay u safri karaan aagag kale. Haddii ay joogaan wax ka yar 14 maalmood, looma oggola inay u safraan meelo ka baxsan meelaha loogu talagalay.